सागमा भिड्लान् भारत र पाकिस्तान ? - Jhilko
तेर्हौ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) आगामी मंसिर १५ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौं र पोखरामा संचालन हुने मिति नजिकिदै जाँदा खेलकुदका पूर्वाधर विकास, नवनिर्मण र पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चासो देखाउन थालेको छ ।
पटक पटक रोकिएको १३ औं साग तेस्रो पटक मंसिर १५ देखि २५ गते सम्म काठमाडौं र पोखरामा हुने तय भएको हो । तर अझै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भने भइ सकेका छैनन् । यसले गर्दा फेरी पनि सागको मिति सर्ने त होइन भन्ने एउटा आशंका जन्माएको छ भने अर्को ज्वलन्त समस्या भनेको भारत पाकिस्तान शितयुद्ध हो । भारत स्वशासित क्षेत्र कस्मिरलाई भारत केन्द्र सरकारले आफ्नो मातहतमा लिएका कारण यतिबेला कश्मिरको जनजीवन अस्तव्यत बनेको छ । उता पाकिस्तानले यही कारण दर्शाउँदै पाकिस्तान–भारत रेलसेवा लगायतका अन्य यातायात एकतर्फि रुपमा रोकिसकेको छ । यसैगरी पाकिस्तानले भारतका लागि पठाएका राजदूतहरु फिर्ता बोलाइसकेको छ ।
यही कारणले गर्दा पाकिस्तानले साग खेलमा सहभागिता जनाउने हो वा होइन भन्ने विषय खेलक्षेत्रमा प्रमुख चासोको विषय बनेको छ । अझ भनौं, यदि सागमा समावेश गरिएकामध्ये कुनै पनि खेलमा पाकिस्तान र भारतका खेलाडी एउटै खेलमा आमने समाने भिड्नु पर्ने स्थिती आए खेलाडीले कसरी खेल कौशल प्रदर्शन गर्लान ? त्यस्तो खेल हेर्न पाउँदा आम दर्शक, खेलप्रेमी, खेल विश्लेषक, पदाधिकारी र प्रशिक्षकमा कस्तो भाव पैदा गर्ला ? पत्रकारले यो खेलको हेडलाइन कस्ता लेख्लान् ? यसपालिको १३ औँ सागले सबैमा यस्तो कौतुहलता जागृत गरेको छ ।
भनिन्छ, खेलकुद क्षेत्र भाइचारा र अनुशासन सिकाउने पाठशाला हो । कतिपय मुलुकको शितयुद्ध र रिसइवीलाई अन्त्य गर्दै मित्रताको कडिमा खेलकुदले जोडेको हामीले देखेका, सुनेका र पढेका छौँ । त्यसैले पनि आगामी १३ औँ सागमा समावेश गरिएका सबै खेलमा भारत र पकिस्तानले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएर विश्वसामू अर्को नयाँ उदाहरण पेश गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो परीक्षामा यी दुई राष्ट्रहरु पास हुन सके युद्धको यात्रामा हिँडिरहेका कतिपय मुलुकहरुलाई दक्षिण एसियाबाट एउटा ठूलो शान्ति, एकता र भाइचाराको सन्देश जानेमा कसैमा दुइमत नरहला ।
राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार शिलवालका अनुसार सहभागिताका लागि भारत र पाकिस्तान बाहेक अन्य चार राष्ट्रहरु माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशको लिखित प्रतिवद्धता नै प्राप्त भइसकेको छ । यद्यपी भारत र पाकिस्तानबाट आफुहरुले सकारात्मक जवाफ पाएको तर लिखित प्रतबद्धता भने आउन बाँकी रहेको शिलबालको भनाई छ ।
भारत र पाकिस्तान त्यस्ता दुई देश हुन् जसको सम्बन्धमा आउने उतार चढावले विगतमा पनि साग प्रभावित भएका उदाहरण छन् । सन् १९८४ मा नेपालबाट सुरु भएको साग (तत्कालिन दक्षिण एसियाली महासंघिय खेलकुद (साफ) को इतिहास ३ दशक भन्दा लामो छ । तर, दक्षिण एसियाको सबै भन्दा ठूलो खेल मेला योजना अनुरुप प्रत्येक दुई वर्षमा भने आयोजना हुन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सागलाई मध्येनजर गर्दै खेलकुद भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा योजना सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरेको छ । सो गोष्ठीले भौतिक पुर्वाधार निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि योजना बाँडफाँड र जवाफदेहिताको विषयमा छलफल गर्नुकासाथै १३ औं सागको भौतिक पुर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
गोष्ठीको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनार (विश्वकर्मा) ले राखेपलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउने भन्दै सुशासन र संस्थागत विकासमा राखेपले नयाँ मोड लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अपेक्षाकृत लगानी प्राप्त नभएका कारण सिमित साधन स्रोतमा नेपाली खेलकुद अगाडि बढ्नु परेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुने र ती पुर्वाधार गुणस्तरीय र समयभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समयबद्ध साताहिकबाट
लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य
अन्तिम समयमा प्रकाश कँडेल छुटेनन्
वहुचर्चित भरतपुरको क्रिकेट रंगशालामा स्थानीयवासीको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रकाश...
विश्वमा कोरोनाभाइरस संक्रमित ६लाख बढी
गायिका आस्था राउत प्रहरीसमक्ष उपस्थित
नातेदारसहित प्रहरीकोमा आत्मसमर्पण गरेकी उनलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा...